Mucheka wemasora unonziwo "mucheka wemasora", "jira rekudzivirira uswa", "jira revhu remubindu", nezvimwewo. Rinonyanya kushandiswa nechinangwa chekudzivirira sora, mvura inoputika, inonyorovesa, kuchengetedza pasi yakachena, kuisa chiratidzo uye kutungamirira. pasi. Kambani yedu inounza epamberi denderedzwa looms, flat looms, waya yekudhirowa michina, rewinder uye zvimwe zvishandiso, inotungamira process tekinoroji, yakaomesesa yekuyedza zviridzwa, yepamusoro yemhando yekudzora tekinoroji uye yakasimba yemhando manejimendi system.
Iyo dema inodzivirira kuchembera uswa-ufakazi jira rinogadzirwa nekambani yedu rakagadzirwa nePP zvinhu zvitsva, izvo zvinogara uye zvinogona kuvharidzira kukura kwemasora akasiyana-siyana, uye ine mhepo yakanaka inopenya, inogona kudzivirira zvinobudirira midzi yekudyara zvinomera uye kuve nechokwadi. kuti une Mugumisiro usingatarisirwi.
Iro jira rinodzivirira huswa (jira repasi remugadheni) rakagadzirwa ne polypropylene, polypropylene uye polypropylene flat yarns semidziyo yakabikwa, uye inoumbwa neangangoita maviri seti eshinda dzakafanana (kana shinda dzakafuratira). Warp warn, rimwe boka rekurongeka kwakachinjika rinonzi weft warn. Iyo warp uye weft zvakarukwa kuita jira chimiro neakasiyana midziyo yekuruka uye maitirwo, ayo anogona kurukwa muhukobvu hwakasiyana uye densities zvichienderana nekushandisa kwakasiyana siyana. Kazhinji, jira rakatetepa rinodzivirira huswa rine simba rakasimba rekusimba mumativi ese akatwasuka uye akachinjika. Simba (longitude yakakura kudarika latitude), nekuita kwakanaka kwekugadzikana.
Hunhu hwejira rinodzivirira huswa (horticultural ground cloth):
Runako rwexu weeding uswa jira, uchishandisa PP polypropylene nyowani zvinhu, biodegradable, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kunoshanda kudzora masora, kuchengetedzwa kwezvinomera, seedbed grassroots dziviriro, kunaka, hunyoro permeability uye mamwe mabasa mune imwe, chengetedza basa uye kushanda nesimba, zviri nyore zvinogona kugadzirisa. dambudziko remasora, pasina kukuvadza mushonga wesora, nezvimwewo, chengetedza zvakanyanya hutano hwako hwepanyama uye hwepfungwa.
2.kureba: 100M, 200m
3.gram uremu: 70g, 90g, 100g
4.color: kunyanya mbishi zvinhu zvitema, zvakajairika dema, girini, dema + shava, chena pachena.
1, kushandiswa kwezvinhu zvitsva: hupenyu hurefu hwebasa, kuchinjika kwakanaka, kushushikana kwakasimba; Wedzera kuramba, UV kuramba.
2, kupinza kwemvura uye kunyorova: pane mukaha pakati pesiriki yakamanikana yakarukwa, ine mwero mvura inopenya. Chengeta mvura mukati uchidzivirira kuora kwemidzi.
3, kudzora sora: kudzivirira chiedza chezuva, kutadzisa kukura kwemasora
4.Product leveling: kugadzirwa kwakanaka, yunifomu ukobvu, kuruka kwakatsetseka, warp yakajeka uye weft
1, anti-weed weeding effect yakanaka, shading rate inosvika 99%, masora haakwanise kukura.
2, kunaka kwemvura kupinza uye kufema kwemhepo, hakukanganise kukura kwezvirimwa.
3, anti-kuchembera yakasimba, hupenyu hurefu hwebasa.
Kudzora sora, kuchengetedzwa kwevhu zvakanaka, kubatanidzwa kwezvinomera, kushongedza gadheni, kutonga kwemvura, mubhedha wembeu basic level kuchengetedza.
Zvakapfuura: Vagadziri vakananga PP yakarukwa bhegi Logistics yekurongedza bhegi
Zvinotevera: China PP Polypropylene Yakarukwa Saga Bag Pack mafashama-uchapupu akarukwa masaga
Green Plant Dziviriro Weeding Mucheka
Pp Polypropylene Inofema Weeding Mucheka
Pp Polypropylene Weeding Mucheka WeGreenhouse
Yakakobvu Pp Polypropylene Weeding Mucheka
Factory wholesale China Garlic uye Onion PP Pla...
Biodegradable Weed Control Fabric, Pp Woven, Heavy Duty Weed Barrier, Weed Control Fabric Roll, Kusakura Mumucheka, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka,